‘इपिक एक्सपिरियन्स’का साथ सामसङको ‘ग्यालेक्सी एस२१’ नेपाली बजारमा – Online Khabar
Home/Nepal/Nepali News/‘इपिक एक्सपिरियन्स’का साथ सामसङको ‘ग्यालेक्सी एस२१’ नेपाली बजारमा – Online Khabar
सामसङ नेपालले हालै एस सिरिज अन्तर्गत ग्यालेक्सी एस २१, एस २१ प्लास तथा एस २१ अल्ट्रा स्मार्टफोनहरु नेपाली बजारमा ल्याएको छ ।
नयाँ एस २१ सिरिज मा विभिन्न आकर्षक, आधुनिक डिजाइन, इपिक प्रो ग्रेड क्यामरा, भिडियो एवं हालसम्मकै शक्तिशाली प्रोसेसर राखिएको छ । एस २१, एस २१ प्लास तथा एस २१ अल्ट्रामा अन्य स्मार्टफोनहरुमा नभएका एवं अतुलनीय सुविधाहरु विद्यमान रहेका छन् ।
“सामसङमा, हामीले निरन्तर नयाँ आविष्कारहरु गरी स्मार्टफोनको जगतमा नयाँ आयाम थपेका छौं । नयाँ एस२१ सिरिज यसैको अर्थपूर्ण आविष्कारको प्रमाण पनि हो । प्रयोगकर्ताहरुको दैनिक जिवनलाई अझै सहज एवं समृद्ध बनाएको छ र प्रयोगकर्ताहरुले के चाहनुहुन्छ त्यो भन्दा अझै बढी प्रदान गरिएको छ,” सामसङ मोबाइल नेपालका विजिनेस हेड प्रणय रत्न स्थापितले भने ।
मूल्य, उपलब्धता तथा प्रि-बुकिङ्ग अफर
नयाँ ग्यालेक्सी एस २१ अल्ट्रा १२/२५६ जीबीको मूल्य रु. १ लाख ५४हजार ९९९र तथा ८/२५६जीबीको एस २१ प्लासको मूल्य रु. १ लाख २९हजार ९९९ रुपैयाँ र ८/२५६ जीबीको एस २१को मूल्य १ लाख ९हजार ९९९रुपैयाँछ ।
सामसङले यी सेटहरुको प्रि बुकिङ्ग यही जनवरी २२ तारिखदेखि फेब्रुवरी ४ तारिखसम्म खुल्ला गरेको छ । जनवरी २२ तारिखदेखि नेपालभर रहेका मुख्य मोबाइल स्टोर, इकमर्स प्लाटर्फम जस्तै दराज, स्मार्ट डोको, सस्तोडिल, इसेवा आदिबाट गर्न सकिने सुविधा कम्पनीले मिलाएको छ ।
प्रिबुकिङ्ग गर्नुहुने ग्राहकहरुलाई सामसङले आकर्षक उपहार प्रदान गर्ने जानकारी समेत गरेको छ ।
कम्पनीका अफर यस्ता छन्